व्यवसायमा VR को अनुप्रयोगहरू - विचारबाट कार्यान्वयन सम्म - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
फेब्रुअरी 18, 2021 फेब्रुअरी 17, 2021 डगलर सिजमेची B2B, ब्लग, व्यापार, विशेष समाचार, ग्लोबल थोक अनलाइन, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, प्रविधि, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
किन VR ले यसको प्रभावशाली वृद्धिलाई जारी राख्न अपेक्षा गरेको छ भन्ने आश्चर्यजनक कुरा स्पष्ट छ।
वी.आर. का प्रतिस्पर्धी फाइदाहरू सस्तो, उपभोक्ता मैत्री हेडसेट र वीआर अनुकूल कम्पोनेसको आगमनसँग बढी पहुँचयोग्य बनाइएको छ।
VR व्यवसाय को लागी एक शक्तिशाली उपकरण हो - विशेष गरी WFH युगमा।
दशकको धेरै चर्चा गरिएको टेक्नोलोजी मध्ये एक, भर्चुअल वास्तविकता (VR) - एक पटक मुख्य रूपले गेमरहरू र विकासकर्ताहरू द्वारा एकै सराहना गरियो - अन्तमा सबै उद्योगहरूमा विस्फोट भयो। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र ईन्जिनियरि From देखि निर्माण, पर्यटन र मार्केटिंग; VR को अनुप्रयोगहरु असीमित छन्।
हाम्रो कल्पना मात्र मूल्य वर्धित वर्चुअल वास्तविकता बाट एक व्यापार मा सीमित। अर्को शब्दहरु मा, महान लागत दक्षता, गुणवत्ता उत्पादनहरु, मजबूत टीमहरु, र सुधारित आपरेशनहरु; जसको परिणाम उच्च हुन्छ लगानी फिर्ता; सही VR सामग्री र अनुप्रयोगको साथ सबै सम्भव हुन्छ।
वी.आर. का प्रतिस्पर्धी फाइदाहरू सस्तो, उपभोक्ता मैत्री हेडसेट र वीआर अनुकूल कम्पोनेसको आगमनसँग बढी पहुँचयोग्य बनाइएको छ। अधिक र अधिक व्यवसायहरूले उनीहरूको ग्राहकहरूलाई उनीहरूको दिमागको शरीरबाट मुक्त गर्न र इमर्सिभ र अन्तर्क्रियात्मक डिजिटल संसारहरूमा प्रवेश गर्न सक्षम पार्ने फाइदाहरू देख्न थालेका छन्।
ग्लोबल भर्चुअल वास्तविकता बजार २०१-2016-२०१०: (स्टिस्टा)
किन VR ले यसको प्रभावशाली वृद्धिलाई जारी राख्न अपेक्षा गरेको छ भन्ने आश्चर्यजनक कुरा स्पष्ट छ। VR डिजिटल दायरा भित्रै, प्रयोगकर्ताहरू केवल वर्णन गरेर वस्तुहरूलाई जादू गर्न सक्दछन्। ती गन्तव्यहरू, कोठा र भवनहरूको माझमा आँखाको पलकमा यात्रा गर्न सक्छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, आभासी वास्तविकता भित्र हुने कुनै पनि क्षति बटनको क्लिकले पूर्ववत गर्न सकिन्छ।
यो स्पष्ट छ कि VR व्यवसाय को लागी एक शक्तिशाली उपकरण हो - विशेष गरी मा गृह युगबाट कार्य गर्नुहोस्। यो कार्यान्वयनको सम्पूर्ण मार्गमा अवधारणाको विचारधाराको प्रक्रियामा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ जब नगद रोलिंग हुँदैछ र भविष्यको प्रक्षेपणका लागि मेट्रिक्स मापन गर्न सकिन्छ।
VR के हो र यसले कसरी काम गर्दछ?
भर्चुअल वास्तविकता एक कम्प्यूटर द्वारा निर्मित तीन आयामिक वातावरण वा छविको सिमुलेशन हो। यो दृश्य, श्रवणशक्ति र स्पर्श जस्ता इन्द्रियहरूको माध्यमबाट देखिने वास्तविक र शारीरिक रूपमा अन्तरक्रिया गर्न सकिन्छ वा भित्र कुराकानी गर्न सकिन्छ। धेरै तरिकामा, एक प्रभावी VR अनुभव प्रयोगकर्ताले उनीहरूको वास्तविक वातावरणबाट अनजान हुन दिनु पर्छ किनकी तिनीहरू डिजिटल वातावरण भित्र अस्तित्वमा केन्द्रित छन्।
यसले दुई मुख्य कम्पोनेन्टहरूको प्रयोग गरेर काम गर्दछ; सामग्रीको स्रोत र प्रयोगकर्ता उपकरण - अर्थात सफ्टवेयर र हार्डवेयर। चीजहरू स्ट्यान्डमा हुँदा यसमा हेडसेट, संवेदी दस्ताने, बहु-दिशा ट्रेडमिल, र चश्मा समावेश छन्।
व्यवसाय मा VR को आवेदन
उल्लेख गरिए अनुसार, व्यवसायमा VR अनुप्रयोगको लागि सम्भावनाहरू यति धेरै छन् किनकी व्यापारहरू छन्। जब टेक्नोलोजीको विकास हुन्छ, बजारहरू परिवर्तन गर्न जारी रहन्छ र उपभोक्ताको माग परिवर्तन हुन्छ, यी अनुप्रयोगहरू अधिक नवीन र परिष्कृत हुनेछन्। यहाँ केहि उदाहरणहरू छन् जुन कसरी VR व्यावसाय प्रक्रियामा लागू हुन्छ आदर्शतादेखि कार्यान्वयन सम्म।
विचार र व्यापार योजना
महत्वाकांक्षी उद्यमीहरू, अनुभवी लगानीकर्ताहरू र अनुभवी व्यापारी नेताहरू प्रत्येक, एक बिन्दु वा अर्कोमा, उनीहरूको व्यवसायको कल्पना गर्न बस्छन्। परम्परागत रूपमा, यसले टोली बैठकहरूको लागि कल गर्दछ, कागजमा कलम राख्दै र मैन्युअल रूपले प्रोटोटाइपहरू निर्माण गर्दै जस्तै उत्पादन डिजाइन चरणले देखा पर्दछ।
VR, संचार प्रक्रियाहरू, सहयोगी क्षमता र उत्पाद डिजाइन को प्रयोग सबै अधिक कुशल र लागत प्रभावी र। ब्यापारको प्रारम्भिक चरणमा, धेरैजसो व्यवसायीसँग समय वा संसाधन हुँदैन गल्ती गर्न वा धेरै लामो समय लिनका लागि। यहाँ छ कि कसरी तपाइँको यात्रा को शुरुवात बाट VR मा लगानी मद्दत गर्दछ।
१. सञ्चार र सहयोग
पावरपोइन्ट प्रस्तुतीकरणहरूमा ब्यापार बिचार, तथ्या graph्क र ग्राफ प्रस्तुत गर्ने दिनहरू भयो, तपाईंको टोलीका सदस्यहरूलाई एक छानामुनि यात्रा गर्न र जम्मा गर्न बाध्य पार्दै, र पार्सल खेल्दा जब यो एकल परियोजना, उत्पादन वा सेवा विकासको सहयोगमा आउँदछ।
VR टेक्नोलोजीले टिम भित्र सबै कुञ्जी खेलाडीहरूलाई सक्षम बनाउँछ - र अन्य - उनीहरूले भर्चुअल कोठामा भेट्न सक्छन् जहाँ तिनीहरू छलफल गर्न र टाढाैबाट व्यवसाय विचारहरूमा सहयोग गर्न सक्छन्। डाटा देख्न सकिन्छ थ्रीडीमा, र तपाईंको पीडीएफ प्रिन्ट-आउट तथ्या of्कहरू सन्दर्भ गर्न आवश्यकता हराउनेछ।
सहकार्य सबैलाई VR टेक्नोलोजीको साथ निर्बाध बनाइएको छ - जे भए पनि तिनीहरू जहाँ भए पनि डाटा, उत्पादन विचार र बैठक कोठामा पहुँच राख्छ। यो विशेष गरी प्रारम्भिक दिनको सुरुवातका लागि सुविधाजनक हो कि सायद अझै आधिकारिक भौतिक बैठक ठाउँ छैन।
भर्चुअल रियलिटीको दायरा भित्र, विकासमा उत्पादको वास्तविक आकारको प्रोटोटाइपहरू सबै कोणबाट पहुँच र परिमार्जन गर्न सकिन्छ।
२. उत्पाद विकास
भर्चुअल वास्तविकताको दायरा भित्र, विकासमा उत्पादको वास्तविक आकारको प्रोटोटाइपहरू सबै कोणहरूबाट पहुँच गर्न र परिमार्जन गर्न सकिन्छ। यसले पैसा र समय दुवैको हिसाबले अपशिष्टलाई कम गर्दछ, तर यसले विकासको शुरुआती चरणमा लगानीकर्ता र प्रमुख सरोकारवालाहरूको लागि भर्चुअल ढोका खोल्छ।
परिवर्तन गर्न आवश्यक छ, VR मा प्रोटोटाइप एक बटन को क्लिक मा अनुकूलित गर्न सकिन्छ। यसको पछाडि सुरक्षाले लगानीकर्ताहरूलाई जित्न मद्दत गर्दछ जसले चाँडै तपाईंको तैयार उत्पादमा सामर्थ्य देख्नेछ।
समान शिरामा, भर्चुअल रियलिटी उत्पादन डिजाइन यात्राको लागि तपाईंको लक्षित श्रोताहरूलाई आमन्त्रित गर्ने राम्रो अवसर हो। यसले तपाईको ब्रान्डको सुरूवात गर्न बाज र जागरूकता सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। सम्भावित ग्राहकहरूबाट प्रतिक्रिया लिन यो पनि एक शक्तिशाली, लागत प्रभावी तरीका हो - अन्तिम परिवर्तनहरू हुनु अघि। यस अवसरको प्रयोग गरी तपाइँको लक्षित श्रोतालाई देखाउन कि तपाइँ उनिहरुका आवश्यकताहरु पुरा गर्न उदाई भइरहेको छ र तिनीहरु सुन्न यहाँ हुनुहुन्छ। उनीहरूले महसुस गरेको मूल्यको भावनाले भविष्यमा उनीहरूको ग्राहक वफादारीमा योगदान पुर्‍याउँछ।
Rec. भर्ती र प्रशिक्षण
तपाईंको टोलीमा खोज, प्रशिक्षण र सही प्रतिभा राख्ने जत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सबै व्यवसाय प्रतिभा को पोखरी मा सबै भन्दा राम्रो लागि प्रतिस्पर्धा रूपमा; सयौं सीभीहरू मार्फत खेल्ने दिनहरू सकियो। वी.आर. भर्ती कोठाहरूले उम्मेदवारहरूलाई इमर्सिभ र आकर्षक अनुभवहरू प्रदान गर्न सक्दछन्, जहाँ उनीहरू कार्य, चुनौती र खेलहरूको एक श्रृंखलाका साथ सामना गर्न सकिन्छ। परिणामहरू रेकर्ड गर्न सकिन्छ र भर्ती प्रक्रियामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी सबैको कुनै पनि व्यवसायको भौतिक स्रोतहरू बिना पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ।
VR प्रयोग गरेर कर्पोरेट प्रशिक्षण कहीं अधिक कुशल र लागत बचत गर्दछ। एक देखि एक सल्लाहकार सत्र राम्रो प्रशिक्षण मा प्रभावी हुन सक्छ तर यो समय र महँगो छ। प्रशिक्षणका लागि म्यानुअल र पाठ्यपुस्तकहरूमा फर्केका कम्पनीहरूले उत्तम नतिजा प्राप्त गर्दैनन्। VR प्रशिक्षण कोठा वा वातावरणले व्यवसायलाई उनीहरूका कामदारहरूका लागि अन्तर्क्रियात्मक र प्रभावकारी प्रशिक्षण सत्रहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। यी सत्रहरू, अवश्य पनि, परिमार्जन गर्न सकिन्छ र फेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
जब व्यवसायहरू उनीहरूको बजार अनुसन्धानको साथ हुन्छन्, आफ्ना प्रोटोटाइपसँग सन्तुष्ट हुन्छन् र बोर्डमा लगानीकर्ताहरू हुन्छन्, यो समय आउँछ व्यवसाय चलाउने र आभासी वास्तविकता प्रयोग गर्न डाटा र वित्तीय तथ्या analy्कहरूको विश्लेषण गर्न, अगाडि बढ्न प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न, र विस्तारको लागि तयारी गर्न।
व्यवसाय मा भर्चुअल वास्तविकता को सबै भन्दा उपयोगी अनुप्रयोगहरू मध्ये एक यसको सामूहिक जटिललाई रूपान्तरण गर्ने क्षमता हो दृश्यमा डाटा जुन सजिलै बुझ्न सकिन्छ र व्यापार निर्णय-निर्माताहरूले प्रयोग गर्न सक्दछन्।
2D डाटामा स्पट्टिंग ट्रेंडहरू र बान्कीहरू समय उपभोक्ता हुन सक्छ र प्राय: मानव मस्तिष्कको संज्ञानात्मक क्षमताहरू बाहिर। थ्रीडीमा भिजुअलाइजिंग डेटा प्रयोगकर्ताहरूलाई पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ, टाढाबाट पछाडि सर्नुहोस्, र सबै कोणबाट वास्तविक-समयमा डाटा हेरफेर गर्नुहोस्।
augmented वास्तविकता सांप्रदायिक समाचार भर्चुअल वास्तविकता VR
डग्लर एक धारावाहिक लगानीकर्ता, संस्थापक र सीईओ हो जसले २० वर्ष भन्दा बढी उडान, रसद र वित्तमा उद्योग अनुभव गर्दछ। व्हर्टन स्कूल र एमआईटी बाट स्नातक। अध्यक्ष मा अधिनियम एयरलाइन्स, माइटेक्निक र मेसमर्सी भीआर। CEO मा RCCL र EHGC। को सह-संस्थापक मार्सफिल्डहरू, ARQ र अनुप्रयोग दोहोर्याउनुहोस्। ऊ पनि व्यक्तिगत चलाउँछ ब्लग जहाँ उनले कार्यवाही योग्य व्यवसाय ब्यबश्थापन र कोष सल्लाहहरू साझा गर्दछ।